Fikasana hanondrana antsokosoko any Dubai: saron’ny ladoany eny Ivato ny volamena 15 kg | NewsMada
Ampahafirin’ireo bolongam-bolamena efa miteronterona any amin’ny firenena any ivelany ity sarona ity? Tratran’ny fadintseranana eny Ivato, ny asabotsy teo, ny volamena milanja 15 kg mahery, saika haondrana any Dubai. Olona iray voarohirohy.
Milanja 15,245 kg izao sarona nampiarahina amin’ny asa tanana sary baobab vita amin’ny vy izao ary mitentina hatrany amin’ny iray tapitrisa dolara na efatra lavitrisa ariary ny vidin’izany.
Voatazona ny olona iray, teratany Malagasy, ary iraka ihany fa tsy tompon’ny entana anisan’ny voarohirohy ka hatolotra ny fampanoavana. Nampiarahina amin’ny asa tanana vy tokony halefa sy voasoratra eny anivon’ny ladoany izany entana izany. Tsy misoratra amin’ny anaran’ny tompony ny entana fa olona manao sorona ny tenany sy manana fahasahiana ny nitondra azy ity. « Matihanina ary efa avo lenta ny fomba fanaon’izy ireo amin’izany fanondrazana antsokosoko izany. Hatao ny fanadihadiana ny tena ny tompony », hoy ny tale jeneralin’ny ladoany, i Zafivanona Lainkana Ernest. Nanteriny fa efa mandeha ny famotorana. Notsiahiviny fa orinasa iray misy anarana malagasy, efa fantatra any Dubai, ny nanafatra azy io ary saronana hosoka amin’ny resaka kolontsaina sy fampianarana ataony izany.
Araka izany, fandikan-dalàna eo anivon’ny ladoany izao ary fandikan-dalàna koa eo amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany, noho ny fandrarana fanondranana any ivelany. Nohararaotina amin’ny mbola fihidin’ny sisintany sy ny valanaretina Covid-19?
Volamena 25 kg atsy Maorisy
Tsiahivina fa any Maorisy koa ilay volamena 25,5 kg sarona ny janoary 2019. Nokasaina halefa any Dubai sy Inde izany, saingy sarona ireo olona telo tompon’antoka amin’izany ary efa nogiazan’ny fanjakana maorisianina ilay volamena. Efa nivoaka ny didim-pitsarana amin’ny hamerenana azy io eto Madagasikara ary hatao fananam-panjakana eo anivon’ny Banky foiben’i Madagasikara. Tsy mbola fantatra na efa hatraiza ny fifampiraharahana amin’ny Maorisianina momba io volamena io na efa nandraisana fanapahan-kevitra tamin’ny filankevitry ny minisitra ny 30 septambra lasa teo aza. Izao sarona izao indray koa ny volamena 15 kg hafa…